रोकिएन सीमा अतिक्रमण, नेपाल किन माैन ? - BirtaJyoti
super userMarch 19, 2020 6:30 am 0
काठमाडौं । सीमा अर्थात सार्वभौम राष्ट्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग भू–भागको घेरा हो । सीमामा दुई देशबीच भौतिक तरिकाले स्तम्भ निर्माण गरिएको हुुन्छ । नेपाल–भारतबीचमा पनि यस्तै सीमा स्तम्भ छन् । सीमारेखा जमिनको सतहबाट सिधै तल पृथ्वीको केन्द्र विन्दुसम्म र जमिनबाट माथि सिधै आकाशमा अनन्तसम्म पुगेको मानिन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम संम्वत १८२६ मंसिर १ गते एकीकरण गरेपछि नेपाल–भारत बीचको सीमा विवाद शुुरु भएको मानिन्छ । सन् १८१६ मार्च ४ मा दुई देशबीच सुगौली सन्धिमा नेपालले थुप्रै भूमि गुमाइसकेको छ ।
सुगौली सन्धिपछि नै मेची नदीदेखि टिष्टासम्म, महाकाली नदीदेखि सतलज र तराई क्षेत्रसमेत गुमाएको थियो । सन् १८१६ डिसेम्बर ११ मा नेपालले पूर्वी तराईको राप्ती–कोशी क्षेत्र फिर्ता पायो भने १८६० नेभेम्बर १५ मा पश्चिम तराइको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता पाएको थियो । अहिले फेरि नेपालका २६ जिल्लामध्ये २३ जिल्लाका ७१ स्थानको सीमा अतिक्रमणमा परेको छ र ६० हजार ६६२ हेक्टर नेपाली भूमि अतिक्रमणमा परेको सीमाविदले बताउने गरेका छन् । भारतको बलमिचाइका कारण यो समस्या चर्किंदै गएको छ ।
भारतले अहिले पनि नेपालको ६ सय ६ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल मिचिसकेको छ । सीमावर्ती विभिन्न २३ जिल्लाका सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने नेपाली नागरिक र भारतीयबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ । भारतले बलमिच्याइँ गरेर बाँकी सीमाना पनि आफ्नो पक्षमा पार्न खोजिरहेको छ । तराइको सीमा क्षेत्रमा नेपालीहरु त्रासै त्रासमा बाँचिरहेका छन् । यो समस्या कञ्चनपुरको पुनर्वासमा पनि छ । सीमा बचाउन खोज्दा गोविन्द गौतमले ज्यान गुमाइसकेका छन् । सरकारले विभिन्न समयमा समस्या समाधानका प्रयासहरु गरेपनि समस्या सुल्झन सकेको छैन् । तर, अझ बढी उल्झन थालको पो भान भइरहेको छ ।
पुनर्वास सीमा समस्या जटिल छ । समस्या समाधान गर्न सरकारले पठाएको सीमा सर्वेक्षण टोली विवाद सुल्झाउन नसकेरै फर्किएका छन् । त्यसक्षेत्रमा २०२४ सालदेखि जग्गा भोगचलन गर्दैआएका र नजिकैको नदिलाई सीमा मान्दै आएका स्थानीय रातारात पिलर सारिने समस्याले चिन्तित छन् । भारतले २०३२ मा निर्मित २८ नम्बर पिल्लर र त्यसपछि ३०, ३१ र ३२ नम्बर पिलरमाथि नदी मिसिएपछि भारतले फाइदा उठाउन खोजिरहेको छ ।
एसएसबीले निहत्थामाथि गोली हान्छ,, नेपालका सुरक्षाकर्मी कहिले खटिने ?
प्याराताललाई आफ्नो पक्षमा पार्ने सुरले कञ्चनपुर जिल्लाको सीमास्तम्भ भारतले सार्न खोजेको स्थानीयको आशंका छ । २०६१, ०६२ सालमा आएको नेपाल–भारत संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले प्याराताल भारततिर पार्ने गरी सीमा स्तम्भ गाडेपछि विवाद सुरु भएको हो । सीमानाको अधिकांश भाग दुधवा नेसनल पार्कसंग जोडिएकाले कैलालीको झण्डै एक सय किलोमिटर र कञ्चनपुरको ७० किलोमिटर भन्दा बढी सीमाक्षेत्र भारतको दुधवा नेसनल पार्कसंग जोडिएको छ । प्याराताल भन्दा पनि ४ सय मिटर पर भारततिर मात्रै सीमा स्तम्भ थियो । अहिले त्यो सारिदै आएको छ ।
६ किलोमिटरको दुरीसम्मका पिल्लरहरु त रातारात गायब गरिएका थिए । २०६१, ६२ को संयुक्त सर्भे टोली आउनुपुर्व नै भारतले ती पुराना पिलर नेपालतर्फ सारेको बताइन्छ । २०६२ अघिसम्म प्यारातालको माछा जिल्ला विकास समिति कञ्चनपुरले ठेक्का लगाउँदै आएको थियो । २०६३ सालको फागुन २६ गते सीमाकै विवादले पुर्नवास नगरपालिकाको आनन्द बजारमा स्थानीय युवक, गोविन्द गौतमको भारतीय सुरक्षकर्मीले चलाएको गोली लागी मृत्यु भएको थियो । गोविन्द गौतमको मृत्युपछि, सरकारले गठन गरेको विशेष नापी टोली र त्यसपछि दुई वर्षसम्म दुईवटा फरक र फरक संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले कैलाली र कञ्चनपुरमा काम गरिसकेको छ । समस्या समाधान भएको छैन् ।
आर्थिक वर्ष २०७३, ०७४ मा नेपालका तर्फबाट प्रमुख नापी अधिकृत सुदर्शन धामीको नेतृत्वको टोली र २०७४, ०७५ मा प्रमुख नापी अधिकृत जनकराज भट्ट नेतृत्वको टोली कञ्चनपुरको पुर्नवास क्षेत्रको सीमा समस्या जटिल भएको भन्दै फर्किएका थिए । यता, सर्भे टोली फर्किन्छ । तर, उता भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीकको ज्यादती सुरु हुन्छ । हालसम्म एसएसबीले ३ जना नेपालीको ज्यानै लिइसकेको छ । एसएसबीले सन् २००१ बाट नेपाली जनमानसमा त्रास फैलाउन थालेको हो । एसएसबीबाट बर्दिया, मोरङ, सप्तरी, कञ्चनपुर र नवलपरासीका बासिन्दा सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् । यस्तो अवस्थामा जनताले नेपाली सुरक्षा टोलले आफुलाई सुरक्षा दिएको हेर्न चाहेका छन् । निहत्था जनता कसरी सामना गरुन् हतियारधारी बलको? सरकारले जनताको यो अपेक्षा छिटै पूरा गर्नु आवश्यक छ ।
झापाका शिक्षक–कर्मचारीको तलब बढ्यो
झापा । न्यून तलब सुविधामा काम गर्दै आएका सामुदायिक विद्यालयका बाल विकास शिक्षक र कर्मचारीलाई झापाका दुइटा पालिकाले श्रम ऐनअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेका ... Read More
ढुंगासहित नियन्त्रित दुई वटा टिपर बिना कारबाही छाडियो, डिएसपीको दबाबमा टिपर पुनः नियन्त्रणमा
पार्थ मण्डल भद्रपुर । चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन गरी बिल नकाटेर ल्याएको दुई टिपर ढुंगा नियन्त्रणमा लिएको १८ घण्टापछिबिना कारबाही छाडिदिएका छन्। प्रहरीचौकी चाराआलीमा रहेका ढुंगा लोड ... Read More
NEWER POSTजन्मदिनमा नेता खनालले न कोहीसँग भेटे, न त केक काटे
OLDER POSTनौ करोडको चलखेलपछि चार वटा सडक पेटी ठेकेदारलाई
इलाममा भाइले गरे दाजुको हत्या
सर्वाधिक महँगो मुल्यमा ‘छ माया छपक्कै’ को इन्टरनेशनल राइट्स बिक्रि
भारतीय सहरमा यसरी ठगिए नेपालका बिरामी